Izindlela ezi-3 Zokusebenzisa Izinhlolovo Zokucwaninga Kwezimakethe Okungcono | Martech Zone
Izindlela ezi-3 Zokusebenzisa Ucwaningo Lokucwaninga Kakhulu Kwemakethe
NgoMsombuluko, Februwari 13, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UHanna Johnson
Amathuba ukuthi uma ufunda Martech Zone, usuvele uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza ucwaningo lwemakethe kunoma yiliphi isu lebhizinisi. Ngalapha e SurveyMonkey, sikholwa ukuthi ukwaziswa kahle lapho wenza izinqumo kuyinto enhle kakhulu ongayenzela ibhizinisi lakho (nempilo yakho uqobo, nayo!).
Ukuhlolwa okuku-inthanethi kuyindlela enhle yokwenza ucwaningo lwemakethe ngokushesha, kalula, futhi kubiza ngempumelelo. Nazi izindlela ezi-3 ongazisebenzisa kuzinhlelo zakho zebhizinisi namuhla:
1. Chaza iMakethe Yakho
Ngokusobala isici esibaluleke kakhulu ocwaningweni lwemakethe sichaza imakethe. Ungahle uyazi imboni yakho nomkhiqizo wakho kuze kufike kwisayensi, kepha lokho kukuletha kuphela kuze kube manje. Ngabe abelungu, abesilisa abangashadile abaseminyakeni yama-30 bathenga imoto yakho, noma amantombazane asemasha angamakhasimende akho amakhulu? Impendulo yalowo mbuzo izoba nomthelela omkhulu kumasu akho ebhizinisi, ngakho-ke ufuna ukuqiniseka ukuthi uyaqiniseka kuwo.
Thumela inhlolovo yabantu elula kumakhasimende akho, amaklayenti, noma isisekelo sabalandeli. Sebenzisa ithempulethi eyenziwe nguchwepheshe, noma dala eyakho. Babuze ngeminyaka yabo, ubulili, ubuhlanga, izinga lemfundo, nezinto abazithandayo. Buza ukuthi bawusebenzisa kanjani umkhiqizo noma insiza yakho, bese ucela impendulo yabo. Uma wazi ngokwengeziwe ukuthi bangobani nokuthi uwusebenzisa kanjani umkhiqizo wakho, kuzokwazi kangcono ukubhekelela izidingo zabo futhi ubagcine bebuya ngokuningi.
2. Ukuhlolwa Komqondo
Qalisa a ukuhlolwa komqondo ukuhlola impendulo yomthengi kumkhiqizo, uphawu, noma umbono, ngaphambi kokuthi wethulwe emakethe. Izonikeza ngendlela esheshayo nelula yokuthuthukisa umkhiqizo wakho, ukukhomba izinkinga ezingaba khona noma amaphutha, futhi kuqinisekiswe ukuthi isithombe noma umkhiqizo wakho uqondiswe kahle.
Faka isithombe semibono yakho yelogo yakho, ingcaca, noma isikhangiso kunhlolovo eku-inthanethi bese wenza izethameli zakho zikhethe ezizithandayo. Babuze ukuthi yini evelele kubo, ukuthi isithombe sibenze bacabanga futhi bazizwa kanjani.
Kuthiwani uma into odinga impendulo kuyo kungesona isithombe noma ilogo, kepha umqondo? Bhala amazwibela amafushane abaphenduli bakho abazowafunda ngawo. Bese ubabuza ukuthi bakhumbule ini, ukuthi baphendule bathini, yiziphi izinkinga abangazilindela. Abantu abahlukene bazobona izinselelo namathuba ahlukahlukene kumbono wakho, futhi impendulo yabo izobaluleka kakhulu njengoba uhlela kahle izinhlelo zakho.
Angazi ukuthi ufinyelela kanjani izithameli zakho ezihlosiwe? Sinomunye ongakhuluma naye…
3. Thola Impendulo
Lapho usuchaze inani lemakethe yakho, wahlola imibono yakho, futhi wenza umkhiqizo wakho, kunesinyathelo esisodwa esibaluleke kakhulu enqubeni. Ukucela nokuhlaziya impendulo kubalulekile uma ufuna ukuqhubeka nokuletha imiphumela emihle. Thola ukuthi wenzeni kahle, yiziphi izingqinamba abantu abanazo, nokuthi bangathanda ukuthi uthathe siphi isiqondiso ngokuzayo.
Awudingi ukuthatha zonke iziphakamiso ozithola lapho ucela impendulo. Kepha ngokuyicela futhi unake okushiwo ngabantu, uzokulungela kangcono ukuphumelela emizameni yokudala yesikhathi esizayo. Amakhasimende akho azokwazisa ukuthi ubuzile, futhi azokwazisa ukuthuthuka okwenzayo nakakhulu.
Awudingi ukwenziwa ngemali ukuze uhlanganyele ocwaningweni lwemakethe olusebenzayo. Udinga nje ukusizakala ngamathuluzi angabizi kakhulu ongawathola ku-inthanethi. Ngo- SurveyMonkey sihlala sisebenzela ukuthuthukisa ubuchwepheshe bethu ukukusiza wenze izinqumo zakho ezinhle kakhulu, unolwazi. Ngokuthumela ucwaningo ukufinyelela emakethe yakho ehlosiwe, ungaqiniseka ukuthi imizamo yakho isebenza ngempumelelo ngangokunokwenzeka.
Ukwenza inhlolovo enhle!
Tags: ukuhlolwa komqondoukubalwa kwabantuucwaningo lwemaketheizinhlolovo ezenziwa onlineimpendulo yomkhiqizoSurveyMonkeyucwaningo locwaningo lwemakethe
UHanna uyi-Social Media Marketer ye- SurveyMonkey. Ukushisekela kwakhe zonke izinto zenhlalo kudlula kakhulu ekusakazeni kwakhe kweTwitter. Uyabathanda abantu, ihora lokujabula, nomdlalo omuhle wezemidlalo. Uhambele wonke amazwekazi ngaphandle kwe-Antarctica, kepha usebenza kulokho ...
Amagama Okufanele Uwagweme ngama-imeyili
Ubuciko Bamaklayenti Abawela Othandweni
Feb 13, 2012 ngo-10: 53 PM
Senza inhlolovo yethu yamabhizinisi amancane yemithombo yezenhlalo yaminyaka yonke, sisebenzisa i-surveymonkey okokuqala ngqa. Kungihlabe umxhwele ngempela ukuthi kwakulula kanjani ukwakha. Kepha okwenze umlandeli wami ngempela ngabaqoqi abahlukene. Ngiyathanda ukukwazi ukubona ukuthi iziphi izinkundla eziqhuba abaphendula kakhulu.
Ngingathanda ukukumema ukuthi wabelane ngemicabango yakho. Tthatha inhlolovo manje.
Feb 14, 2012 ngo-2: 54 PM
Loraine - Ngivumelana nawe kumazwana athi "kulula ukwakha". Lapho senza i-R & D ekuqaleni kwami ​​kokuqala, besithembele kuSurveyMonkey cishe yonke idatha eqoqwayo. Nginomuzwa wokuthi leli thuluzi kufanele libe yisidingo Sabosomabhizinisi kanye neziqalo!
Feb 15, 2012 ngo-2: 09 PM
Ucwaningo luhlala lungumthombo omuhle wokuqoqa imininingwane ethile. Kungakuhle ukuzwa imicabango yakho kumkhuba wokuqoqa izimpendulo zamakhasimende ezinkundleni zokuxhumana nokuthi lokhu kuzoba namthelela muni esikhaleni “sendabuko” sokuhlola iwebhu. Ngabe siphokophele endaweni lapho ezingeke zisasebenza khona?